Prof. Axmed Muumin Warfaa, oo la-taliye sare u ahaa m/weyne Shariif oo is casilay. – Radio Daljir
Prof. Axmed Muumin Warfaa, oo la-taliye sare u ahaa m/weyne Shariif oo is casilay.
Febraayo 20, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Feb 20 – Prof. Axmed Muumin Warfaa oo la-taliye sare u ahaa m/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed, ayaa ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi la-talinta.
La-taliyaha ayaa sheegay is casilaaddiisu in ay ka danbaysay kadib markii m/weyne Shariif uu ku guul-daraystay fulinta talooyin wax ku ool ah oo sida uu sheegay la-taliyuhu uu m/weynaha ku soo gudbiyey, kuwaasi oo ku saabsanaa hormarinta hannaanka siyaasadeed ee dawladda.
La-taliyuhu, waxaa uu carrabka ku adkeeyey m/weyne Shariif in uu dhagaha ka furaystay talooyin badan oo uu u soo jeediyey, wuxuuna intaasi ku daray in uu aad ugu rajo xun-yahay hanaqaadidda dawladda Shariif oo haatan la daalaa-dhacaysa illaalinta amniga madaxdeeda, taasina ay sababta is casilaaddiisa.
Is casilaadda la-taliyahaan ayaa ku soo beegmaya xilliga ay sii kordhayaan dagaallada iyo weererada lagu hayo dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, isla markaana ay soo baxayaan khilaafyo horleh oo u dhaxeeyey golayaasha dawladda.
Al-shabaab oo dib u qabsaday Dhoobley & dhiillo colaadeed oo halkaasi ka taagan.